Tombanana ho 9.7 miliara ny isan'izao tontolo izao amin'ny 2050. Araka ny Fikambanana momba ny sakafo sy ny fambolena (FAO), midika izany fa ny famokarana sakafo eto an-tany dia mila mitombo 70% hamaly ny fangatahan'ny mponina manerantany amin'izany taona izany. Fikarohana iray tsy mitsaha-mitombo no mampiseho fa mihazakazaka amin'ny tsy fahampiana ekolojika izao tontolo izao. Tombanana ho 85% ny mponina no monina any amin'ny firenena izay ampiasana haingana kokoa ny harena voajanahary noho ny omen'ny tontolo iainana maharitra. Sehatra lehibe iray ny famokarana sakafo izay tompon'andraikitra amin'ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana, mitentina 25% ny entona entona entona miompana amin'ny tany, 70% ny fampiasana rano velona, ​​ary 80% ny fahaverezan'ny toeram-ponenana. Ny hena toy ny hen'omby sy henakisoa, ankoatry ny karazana proteinina biby an-tanety, dia manana ny taha ambony indrindra amin'ny CO2 fandefasana, fampiasana rano velona, ​​ary fampiasana tany isaky ny fanompoana.